भाडा तिर्न नसकेर कोठाबाट निकालिएका पल शाहले हार खाएर ट्याक्सी चलाउने तयारी समेत गरेका थिए – Gazabkonews
भाडा तिर्न नसकेर कोठाबाट निकालिएका पल शाहले हार खाएर ट्याक्सी चलाउने तयारी समेत गरेका थिए
भाडा तिर्न नसकेर कोठाबाट निकालिएका पल शाहले हार खाएर ट्याक्सी चलाउने तयारी समेत गरेका थिए, यि होटलमा अहिलेसम्म बाँकी छ उनको, अहिले कार चढेर सरर हिँड्दा देखे ति होटल, भिडियोमा हेर्नुहोस् विबाहबारे छ यस्तो तयारी
यही सेरोफेरोमा हाम्रो कला टिभीले उनीसँग गरेको कुराकानीका क्रममा इन्दिराले आफ्नो संघर्षका दिनदेखि प्रेमसम्मका कुराहरु गर्न भ्याएकी छिन् । अन्य नेपाली सेलिब्रेटीहरुको प्रेम खुलेर सार्वजनिक भइरहँदा किन इन्दिराको सधँे लुकिरहेको छ ? इन्दिरा नेपाली फिल्ममा हिरोइन बनेर आउने सम्भावना कति छ ?
आउनु्स, हेरौँ यो रमाइलो भिडियो कुराकानी ः
लगातार काममा ब्यस्त रहेकी सुन्दरी मोडल अञ्जली अधिकारीको अहिले अवस्था कस्तो छ ?
सामाना म्युजिक क्रियशन युटुब च्यानलमार्फत ‘पानी पाए पछि’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सामाना शाहको शब्द सङ्कलन र केशव श्रेष्टको अभिनय रहेको लोकदोहोरी गीत ‘पानी पाए पछि’को भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
गायिका बिष्णु माझी र भगीरथ चलाउनेको स्वरमा रहेको गीत ‘पानी पाए पछि’मा भगीरथ चलाउनेको सङ्गीत रहेको छ । बिनोद पराजुलीको एरेञ्ज रहेको गीतको रेकर्डिङ राजेन्द्र बाजुरालीले गरेका छन् ।
अञ्जली अधिकारी र केशव श्रेष्टको अभिनय रहेको गीतको भिडियोलाई सिर्जन बरालको निर्देशन छ । राजेश घिमिरेको छायाँकन रहेको भिडियोमा अमृत चापागाईंको सम्पादन छ ।
निरज श्रेष्टको सहनिर्देशन रहेको भिडियोको फोटोग्राफर आयुष सापकोटा रहेका छन् । प्रेम कहानीमा आधारित कारुणीक भिडियोको दृष्य निर्माण जनता डिजिटल फिल्मस् नेपालले गरेको हो ।
काठमाडौँ केन्द्रविन्दु भएर शक्तिशाली भूकम्पको धक्का, आत्तिकै सर्वसाधारण सडकमा
काठमाण्डौ । काठमाडौँ केन्द्रविन्दु भएर शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको हो । विहीबार दिउँसो ३ः३८ मिनेटको समयमा सो भूकम्प गएको हो ।
आज गएको भूकम्प ५ रेक्टर स्केलको रहेको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । सो भूकम्प गोरखा भूकम्पको पराकम्प भएको केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पले कुनै पनि मानविय क्षेती भने नभएको केन्द्रले जनाएको छ ।
धुर्मुस सुन्तली महोत्तरीले निर्माण गरेको एकीकृत नमूना बस्तीमा चिसोका कारण ३५ दिनकी सुत्केरी, नवजात शिशु र एक बालकको मृ,त्यु
काठमाडौ । हास्य कलाकार धुर्मुस सुन्तलीले महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा बनाएको एकीकृत नमूना बस्तीमा चिसोका कारण एकै परिवारका तीन सदस्यको मृ, त्यु भएको छ । बीस दिनका अवधिमा स्थानीयवासी रामरती सदाका घरमा एक बुहारी, एक नाति र एक नवजात नातिनीको मृ- त्यु भएको हो ।
उनले रक्तश्रावकै बीच छोरी जन्माएकी थिइन् । केहीबेरको अस्पताल बसाइपछि नै उनको मृत्यु भएको थियो । साथै नवजात शिशुको पनि जन्मेको ६ घण्टामै मृ-त्यु भएको थियो ।एकैसाथ बुहारी र नातिनीको मृत्युपछि रामरतिका घरमा शोक छाएको थियो । सामाजिक, धार्मिक परम्परानुसार उनको क्रियाकर्म गर्दै गर्दा गत मङ्गलबार १३ औंँ दिनका पुण्यतिथिमा अचानक उनका अर्का आठ महिने नाति ९हरिनारायण सदाका माहिला छोरा० आठमहिने प्रभासको पनि मृ-त्यु भएको रामरतिले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।
संसारकै सबैभन्दा राम्रो अक्षर लेख्ने नेपाली चेली प्रकृति मल्ल, विश्व चर्चित बनिन्
काठमाडौं, २२ पुष । नेपाल प्रहरीले चुनावी तयारीलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा रणनीतिको खाका बनाउन सुरु गरेको छ। कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा चुनावी सुरक्षा रणनीतिको खाका बनाउने काम सुरु गरेको हो।
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट हुने सुरक्षा चुनौती, विप्लव प्रभावित क्षेत्रहरुको पहिचान र वर्गीकरणलगायतका काम पनि सुरु गरिएको हेडक्वार्टरले जनाएको छ।